Published June 8, 2021 at 8:25 PM CDT
Kevin Grieme akka jedhetti jiraattoni Iowa African American ta’an talaali corona virus irrati akka yaada hin jijjiirin himan. Ogeeyonni akka jedhanitti April keessa namni talaali corona virus fudhate parsanti 1 gadda akka tae himan.
Dakota County Health Deparment akka jedhanitti talaali corona virus dhaaf akka beelama qabaa jiran himan. Guyyaa harbaa dhaaf akka karoorfatan himan. Lamaanu talaali Moderna fi one-dose Johnson fi Johnson kan argamu akka tae himan. Oduu dabalataa argachuudhaf gara 402 987 2164 bilbiltanii akka gaafachu dandeetan himan.
Magaalan Sioux City karoora waggaa kana kan Mardi Gras Parade himan. Qophiin kun waggaa darbe sababa Covid-19 haqamee ture. Salfiin guyyaa sanbata kan kabajamuu Park Festival guyyaa harbaa July 1st 6 p.m downtown Sioux City kan kabajamuu akka tae himan.
Guyyaa sanbata guyyaa lama boodoa jimaata, July 2nd fi sanbataa. July 3rd kan qophaahu ta’a. festival sirbaa qopheesitoonni guyyaa har’aa himani jirani jiran. Hip hop naanicha artistota baaye keessa kan madrak irrati bahani keessa akka ta’an himan. Qophiin biraa kan Sioux City madrak irrati mullisu Ultra Violet Fever f Ghost Cat kan qophuudha.
Baayina ummata fi haguugi fuula godhachuun kan dhumaratti kan murtaahu akka tae himan.
Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Barataan Iowa University kan bara 2018 keessa ajjeefame ture…